Isimada Puntland oo go’aano dhabarjab ku ah Deni kasoo saaray xiisadda PSF | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Isimada Puntland oo go’aano dhabarjab ku ah Deni kasoo saaray xiisadda PSF
Isimada Puntland oo go’aano dhabarjab ku ah Deni kasoo saaray xiisadda PSF
Boosaaso (Dalkaan.com) – Isimada dhaqanka Puntland oo maalmahaan u fadhiyey xalka xiisadda magaalada Boosaaso ee u dhaxeysa xukuumadda Deni iyo taliska ciidanka PSF ee uu hoggaaminayo Maxamuud Diyaano ayaa caawa soo saaray 6-qodob oo ay u arkeen in arrintaan lagu xali karo.
Isimada ayaa go’aamiyey in hey’adda PSF ay sideeda sii ahaato oo hoggaankeeda loo daayo Maxamuud Cusmaan Diyaano, iyadoo Agaasime Maxamuud la hordhigay inuu dib isugu raadiyo ciidankii ku kala jabay dagaalkii ka dhacay Boosaaso.
Sidoo kale waxay soo jeediyeen in Madaxweynaha Puntland Saciid Deni iyo Agaasime Maxamuud Cusmaan Diyaano loo dhigo gogol dib u heshiineed, si loo soo afjaro khilaafka.
Qodobka sedaxaad waxay Isimadu ku go’aamiyeen in dhibkii ka dhacay magaalada lagu dagaalamay ee Boosaaso loo bandhigo shareecada Islaamka oo lagu dhaqmo xukunkeeda.
Dhanka kale Isimada ayaa xukumadda Puntland u soo jeediyey in laga laabto heshiiskii ay la gashay shirkadda Imaaraadka ee DPW oo maamusha Dekedda magaalada Boosaaso, iyagoo sheegay in shantii sano ee gacanta ay ku heysay aysan shirkadaasi qaban waxii looga baahnaa.
“Waxaan go’aaminay in 17% dakhliga dekedda loo qoondeeyo hormarinta magaalada Boosaaso, dhaqaalahaas waxaa si wadajir ah gacanta ugu heyn doona, Isimada dhaqanka iyo guddi hormarinta magaalada loo sameyn doono, kuwaas oo noqon doona guddi aamin ah I.A,”ayaa lagu yiri bayaanka Isimada Puntland.
Bayern Munich oo Ousmane Dembele ka dhigatay bartilmaameedka ugu sareeya si...
Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara kooxda Barcelona Ousmane Dembele ayaa lagu soo waramayaa inuu u muuqday bartilmaameedka koowaad ee suuqa kala iibsiga ee Bayern...
Manchester City oo ka naxday ka argagaxday xadgudubka lagula kacay qoyska...
Farmaajo ma u darsaday Xasan Cali Kheyre mise waa ka reystay?
Deg Deg Sidee u dhacday ansixintii ra’isulwasaare Xamse, Xaalada Caafimaad...
Sawirro: Guddigii kasoo laabtay Kismaayo oo warbixin u gudbiyey Rooble
QM oo dalbatay in baaris lagu sameeyo dilkii Aamino